Trump inonoka kutengesa motokari mumashizha kuti ienderane neJapan neEurope - New York Times - TELES RELAY
HOME » mwe Trump inonoka kutengesa motokari mumashizha kuti zvibvumirane neJapan neEurope - New York Times
Chishanu chiziviso chakataura kuti Commerce Research yakaratidza kuti kutengeswa kwemotokari uye zvimwe zvezvikamu zvavo zvakakonzera kusachengetedzwa kwenyika yeUnited States. "Hondo yekudzivirira uye kudzivirirwa kweUnited States kunobva mukukwikwidzana kwemakambani edu emotokari uye tsvakurudzo uye kubudirira zvinogadzira," akadaro White House kuparidzira.
Asi vazhinji kunze kwehutungamiri vakatsoropodza kubatana pakati pemotokari uye kuchengeteka kwenyika. kuti vazhinji vemuAmerica inotengeswa nemotokari inobva kune vepedyo vese vari munyika. Mexico, Japan, Canada, Germany uye South Korea pamwe chete ane mutoro wezvakawanda kupfuura 85% US inotengeswa kuIndaneti.
"Pfungwa yokuti US automakers inopisidzirwa nekutengesa motokari inonyangadza uye isina kugadziriswa," akadaro John Bozzella, purezidhendi weGlobal Automakers, anomiririra kunze kwemotokari yemotokari. "Hapana automaker kana motokari yemugove wekugovera anenge akumbira izvi" kudzivirirwa. "
Economists uye vaongorori vezvemabhizimisi vakataura kuti mitero inowedzera mari yeAmerica motokari uye inotarisa mumari yeUnited States. The Automotive Automotive Center, boka rekutsvakurudza rakabhadharwa muchikamu nemashizha vanofungidzirwa kuti zviyero izvi zvinogona kuwedzera mutengo wemotokari mutsva kubva pamadhora e455 kusvika kuZ $ 6 875, zvichienderana nemutemo wakateverwa.
Pakunzwa Pakupedzisira kwaJuly, zvese zvapupu zviripo, kusanganisira vamiririri vehurumende dzekunze, vatengesi vemotokari, zvikamu zvekugadzira nevatengesi, vakapupurira zvinopesana nezviyero. Sangano reUnited Automobile Workers union ndiro chete.
Jennifer Kelly, tsvakurudzo mukuru pamwe, vati tariffs, vaigona kugadzirisa matambudziko chaiwo kutamira US repair miti kunze, asi kuti "richizvitenda Zviito" aigona kuvawo "kupedzisira nemigumisiro ". kukurasikirwa kukuru kwevashandi veAmerica. "
Trump aigara achitsoropodza kuEurope nokuda kwekuputika mumusika wemotokari yeU.S. asi ichidzivirira kutengeswa kwemotokari yeU.S., uye yakadana kubvunzurudzwa kwemaitirwo ezvinhu zvichiita kuti ukama huve hwakaenzana.